#De Bruyne ay u badan tahay inuu Seegidoono Kulanka Labadda Manchester - Get Latest News From Horn of Africa
Sida wararku ay sheegayaan Kevin De Bruyne ayaa seegi doona kulanka kooxdiisa Manchester City ay la leedahay habeenka Arbacada naadiga Manchester United ee horyaalka Premier League.
Kubbad abuuraha reer Belgium oo 27-sano jir ah ayaa dhaawac muruqa ah uu ka soo gaaray kulankii Sabtidii ay guusha ka gaareen kooxda Tottenham, waxaana uu seegi doonaa kulanka soo aaddan ee Manchester Derby.
De Bruyne ayaa dhaawac muruqa ah uu soo gaaray kulankii ay wajaheen Spurs, laakiin waxaa jira warar sheegaya inuusan dhaawac kale ka soo gaarin jilibka bidix.
Warkan ayaa ku soo aadaya xilli macallin Pep Guardiola uu kulan adag la leeyahay dhiggiisa Ole Gunnar Solskjaer Arbacada soo aaddan.
Tababaraha reer Norway ayaa doonaya in kooxdiisa Man United ay ka soo kabsato guuldarradii shalay oo Axad ahayd ka soo gaartay Everton, markaasoo looga adkaaday 4-0 kulanka ay soo dhoweynayaan dhiggooda Man City.
Red Devils ayaa haatan fadhisa kaalinta lixaad ee horyaalka Ingiriiska, guuldarro ka soo gaarta Manchester City ayaana seejin karta inay ku dhammaysato afarta sare ee horyaalka Premier League si ay xilli ciyaareedka dambe uga soo muuqdaan tartanka Champions League.
34 mins ago 36,504